नेटफ्लिक्सका लागि सर्वश्रेष्ठ वीपीएन - डिसेम्बर २०२० (प्रतिबन्धित सामग्री हेर्नुहोस्) - मनोरञ्जन
नेटफ्लिक्ससँग तपाईंले हेर्न सक्ने सामग्रीको विशाल संग्रह छ, तर भौगोलिक प्रतिबन्धको कारणले गर्दा सामग्री अवलोकन गर्न असम्भव हुन्छ! नेटफ्लिक्सले यसको केही सामग्री पुस्तकालयहरू केवल एक विशेष क्षेत्रका व्यक्तिहरू द्वारा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, र तपाईं यो पहुँच गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं एक विशेष क्षेत्रबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने।
तर भौगोलिक रूपमा प्रतिबन्धित सामग्री पहुँच नेटफ्लिक्सको लागि उत्तम VPN को सहायताले सम्भव छैन। मात्र होइन, यी VPNs प्रयोग गर्न सजिलो छ तर तिनीहरू नेटफ्लिक्ससँग राम्रोसँग काम गर्दछन्।
प्रोक्सीहरू प्रयोग गर्नु एक व्यावहारिक विकल्प होईन किनकि नेटफ्लिक्सले प्रयोगकर्ताहरूलाई रोक्दछ जुन प्लेटफर्ममा पहुँच गर्न कुनै पनि प्रकारका प्रोक्सीहरू चलाइरहेका छन्। यहाँ यस लेखमा मैले नेटफ्लिक्स हेर्नका लागि उत्तम VPN हरू समीक्षा गरेको छु।
म व्यक्तिगत रूपमा यी VPNs मध्ये एक प्रयोग गर्दैछु, र म यससँग खुसी छु। यी नेटफ्लिक्स VPNs जाँच गर्नुहोस्, र तपाईंले हेर्नको लागि मर्दै गरेको सामग्री पहुँच गर्न एउटा पाउनुहोस्।
नेटफ्लिक्सका लागि सर्वश्रेष्ठ VPN - शीर्ष।
यदि तपाईं स्ट्रिमि speed गतिसँग सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न भने, तब एक्सप्रेसभीपीएन तपाईंको छनौट हुनुपर्छ। यो अत्यधिक प्रयोग भएको नेटफ्लिक्स VPN ले आईओएस, एन्ड्रोइड, विन्डोज, म्याक, फायर टिभी स्टिक, र एप्पल टिभी लगायतका उपकरणहरूको राम्रोसँग काम गर्दछ, ताकि तपाईं यी कुनै पनि उपकरणहरूमा नेटफ्लिक्स हेर्न रमाउन सक्नुहुन्छ।
V००० भन्दा बढि लाइभ सर्भरहरू छन् एक्सप्रेसभीपीएनको साथ। यी सर्भरहरू लगभग countries countries देशहरू र १ 160० स्थानहरूमा आधारित छन् ताकि तपाईं एक्सप्रेसभीपीएनको साथ नेटफ्लिक्सको सम्पूर्ण पुस्तकालयमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यदि केसमा, नेटफ्लिक्सले एक सर्भरलाई रोक्दछ, त्यसपछि तपाईं अर्कोसँग जडान गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंलाई आवश्यक सामग्री पहुँच गर्न। ExpressVPN को साथ, तपाईं बिजुली-तेज गति आशा गर्न सक्नुहुन्छ, र स्ट्रिम गर्दा त्यहाँ कुनै पछाडि हुनेछैन। साथै, त्यहाँ एक्सप्रेसभीपीएनमा कुनै डाटा प्रतिबन्ध छैन, र तपाईं चाहानुहुन्छ धेरै शो वा चलचित्रहरू हेर्न रमाउन सक्नुहुन्छ।
तपाई एक्स्प्रेसभिएपएन प्रयोग गरेर एकै साथ पाँच उपकरणहरू मार्फत जडान गर्न सक्नुहुन्छ, यसको मतलब तपाईंको परिवारले पनि एक्सप्रेसभीपीएनका लागि एक मात्र सदस्यता योजनाको साथ उनीहरूको यन्त्रहरूमा चलचित्रहरू र कार्यक्रमहरू हेर्न मजा लिन सक्छ।
को बारे मा सबै भन्दा राम्रो कुरा एक्सप्रेसभीपीएन 30० दिने पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी हो ! तपाईं आफ्नो पैसा फिर्ता दावी गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंलाई लाग्छ कि यो बेकार VPN हो, र म पक्का छु कि तपाईंले त्यसो गर्नुहुन्न।
ExpressVPN का प्रमुख सुविधाहरू:
निर्मित गति परीक्षक
२ * * live प्रत्यक्ष समर्थन
-०-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी
Hulu, BBC iPlayer, Sky TV, HBO GO, र Netflix को साथ काम गर्दछ
साइबरगोष्ट नेटफ्लिक्सको लागि अर्को भरपर्दो VPN हो किनकि तपाईं मात्र केही देशहरू जस्तो यू एस, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, र अधिकमा उपलब्ध सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यो VPN स्मार्टफोन र पीसीको साथ प्रयोग गर्न उपलब्ध छ, जसको मतलब यो कि तपाइँ गो गोमा बहु यन्त्रहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
साइबरगोष्टसँग countries ० वटा देशहरूमा अवस्थित 5, 00 ०० सर्भरहरू छन्, र यसले तपाईंलाई भौगोलिक प्रतिबन्धहरूको बाबजुद सामग्री पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ। यस बाहेक, साइबरगोष्टको साथ, त्यहाँ सीमित वा कुनै बफरि। छैन, र तपाईं HD को गुणस्तर सामग्री कुनै पनि समस्या बिना स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं नेटफ्लिक्स VPN सात उपकरणहरूमा एक साथ स्मार्टफोन र पीसीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, साइबरगोष्टले P 45 दिने पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ VPN योजनाको साथ, त्यसैले तपाईं पक्का आश्वासन पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईं VPN सँग दुखी नभएमा राशि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ।
एक्सप्रेसभीपीएन जस्तै साइबरगोष्टले पनि चौबीसै घडी ग्राहक समर्थन प्रदान गर्दछ, र तपाईं तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ नेटफ्लिक्स VPN स्थापना र प्रयोग गर्न सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको मद्दतको लागि।
साइबरगोष्टको मुख्य सुविधाहरू:
एकै साथ सात उपकरणहरूमा काम गर्दछ
नेटफ्लिक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि विशेष गरी अनुकूलित
Android, IOS, स्मार्ट TV, macOS, र Windows को साथ काम गर्दछ
जब नेटफ्लिक्स हेर्नको लागि आउँदछ, NordVPN प्रयोगकर्ताहरूको पहिलो विकल्प हो। म पनि प्रयोग गर्दैछु नेटफ्लिक्सको लागि NordVPN यसको द्रुत स्ट्रिमि speed गति र सुरक्षित जडानको कारण। साथै, VPN ले अन्य अनुप्रयोगहरूसँग पनि राम्ररी काम गर्दछ, र तपाईंले एक पाउनुहुनेछ Day० दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी यो संग।
NordVPN एक मोबाइल अनुप्रयोगको रूपमा उपलब्ध छ, र तपाईं यसलाई आफ्नो पीसीको ब्राउजरको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, VPN चाँडै यसको to countries देशहरूमा फैलिएको हजारौं सर्भरहरूमा जडान हुन्छ, र तपाईं द गो मा नेटफ्लिक्स हेर्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
NordVPN ले बीबीसी iPlayer, Hulu, र अन्य प्लेटफर्महरूसँग पनि काम गर्दछ ताकि मनोरञ्जन केवल नेटफ्लिक्समा सीमित नहोस्। तपाईं यो नेटफ्लिक्स VPN devices उपकरणहरूमा एकै साथ प्रयोग गर्नका लागि स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष कुराकानी समर्थन बेमेल छ, र तपाईं मद्दत गर्न कुनै पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ 24 *7तपाईंलाई सहयोग गर्न उपलब्ध छ।
अन्य VPNs जस्तै, NordVPN मा मासिक क्याप प्रतिबन्ध छैन, र तपाईं यससँग असीमित डाटा स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई मेरो आईप्याडमा उनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गर्न मनपर्दछ, र यसले मलाई द्रुत रूपमा नेटफ्लिक्स सामग्रीसँग जोड्दछ जुन म हेर्न चाहन्छु।
NordVPN का मुख्य सुविधाहरू
चाँडै जडान गर्दछ
एकै साथ छ उपकरणहरूमा काम गर्दछ
नेटफ्लिक्सको लागि विशेष रूपमा अनुकूलित सर्भरहरू
प्राइभेटभीपीएनले प्रतिबन्धित नेटफ्लिक्स सामग्रीमा राम्रो पहुँच प्रदान गर्दछ किनकि सर्वरहरू प्राय सबै प्रमुख देशहरूमा उपलब्ध छन्। साथै, नेटफ्लिक्स वीपीएनले गति परीक्षणमा राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो, र यही कारण यो हो कि मैले तपाईंलाई यहाँ तपाईंको लागि सूचीबद्ध गरें।
तपाईं मोबाइल अनुप्रयोग मार्फत र साथै ब्राउजरको साथ भीपीएन पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइवेटभीपीएनले तपाईंलाई एकै साथ devices उपकरणहरू जडान गर्न अनुमति दिन्छ र तपाईंले कुनै पनि अन्य उपकरणसँग नेटफ्लिक्स हेर्दा बहु पटक लगइन गर्नुपर्दैन।
असीमित ब्यान्डविथले सीमित डाटाको पहुँचका प्रतिबन्धहरूलाई हटाउँछ, र तपाईं आवश्यक अनुसार धेरै सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। पावर २०4848-बिट ईन्क्रिप्शनले तपाईको खाता सुरक्षित र सुरक्षित राख्छ।
प्राइवेटभीपीएनले day० दिने पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ, ताकि तपाईले रकम फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले नेटफ्लिक्स VPN लाई फाइदाजनक पाउनु भएन भने। मैले प्राइवेटभीपीएन प्रयोग गर्ने प्रयास गरें, र यो उत्तम किफायती वीपीएन हो कि तपाई पैसा पाउन सक्नुहुन्छ।
प्राइवेटभीपीएनका मुख्य सुविधाहरू:
शून्य लग नीति
सर्फशार्कको साथ, तपाईं असीमित उपकरणहरू एकै साथ जडान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईं एक मात्र त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न जो नेटफ्लिक्स हेर्दै रमाईलो गर्दै हुनुहुन्छ। VPN स्मार्टफोन उपयोगकर्ताका लागि उपलब्ध छ, र तपाईले यसलाई पीसी ब्राउजरको माध्यमबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। SurfShark असीमित ब्यान्डविथ प्रदान गर्दछ, र तपाईं यससँग हेर्न सक्नुहुने सामग्रीमा कुनै प्रतिबन्ध छैन। VPN प्रयोग गर्न सजिलो छ, र तपाईं यो द गो मा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, सर्फशार्कको दाबी छ कि त्यहाँ कुनै पनि बफरिंग हुनेछैन र HD गुणवत्तामा सामग्री पहुँच गर्न तपाई अनुकूलित गति पाउनुहुनेछ।
VPN सँग लगभग १,०40०+ सर्भरहरू छन् जुन विश्वभरि बिभिन्न देशहरूमा अवस्थित छ। SurfShark को बारे मा सबै भन्दा राम्रो पक्ष NoBorders मोड को उपलब्धता हो कि तपाइँ सबै प्रकारको प्रतिबन्ध पार गर्न अनुमति दिन्छ, यो नेटफ्लिक्स को लागी एक सबै भन्दा राम्रो VPNs को एक बनाउने।
धेरै VPN हरू चीन, युएई र टर्कीमा काम गर्न असफल हुन्छन्, तर SurfShark त्यो हो जुन तपाईंले नेटफ्लिक्स हेर्नु पर्छ यदि तपाईं यी कुनै स्थानहरूमा हुनुहुन्छ भने। जब तपाइँ SurfShark मा साइन अप गर्नुहुन्छ, तपाइँले 30० दिने पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी पाउनुहुनेछ, त्यसैले तपाइँको पैसा सुरक्षित छ यदि तपाइँले सदस्यता चुनेको days० दिन अघि सदस्यता रद्द गर्नुभयो भने।
सर्फशार्कका मुख्य सुविधाहरू:
असीमित उपकरण जडान
कुनै ब्यान्डविथ प्रतिबन्ध छैन
कुनै पनि बफरि। छैन
यूट्यूब, स्काई टिभी, HBO GO, र अधिक सहित धेरै प्लेटफार्महरूसँग काम गर्दछ
भौगोलिक रूपमा प्रतिबन्धित सामग्री पहुँच गर्नका लागि उत्कृष्ट
VyprVPN राम्रो सुरक्षाको लागि यसको व्यक्तिगत सुरक्षा प्रोटोकलको साथ आउँदछ जब तपाईं नेटफ्लिक्समा सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ। नेटफ्लिक्स VPN स्मार्टफोन र कम्प्युटरहरू सहित बिभिन्न उपकरणहरूसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। साथै, तपाई VyprVPN का साथ एक साथ5अलग उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
VPN असीमित ब्यान्डविथ प्रदान गर्दछ, र तपाईं कुनै पनि डाटा प्रतिबन्धको चिन्ता बिना सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ करीव 700०० सर्भरहरू 70० बिभिन्न देशहरूमा अवस्थित छन् जुन २००,००० आईपी ठेगानाहरूमा अनुवाद गर्न सकिन्छ, त्यसैले यदि नेटफ्लिक्सले एक रोक्छ भने तपाईले अर्कोलाई नेटफ्लिक्स हेर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यसबाहेक, VyprVPN इन्टरनेट गति मा हस्तक्षेप गर्दैन, ताकि तपाईं बफरिंग बिना सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। VyprVPN प्रयास गर्दा, मैले थाहा पाए कि मोबाइल अनुप्रयोग वास्तवमै राम्रोसँग काम गर्दछ। तपाईं VPN का साथ घडी कुराकानी समर्थन पाउनुहुनेछ ताकि तपाईंले नेटफ्लिक्स VPN जडान गर्न आवश्यक मद्दत प्राप्त गर्नुहुनेछ।
जब यो पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीको कुरा आउँदछ तब VyprVPN 30० दिने ग्यारेन्टीको साथ आउँदछ, र यदि तपाइँले day० दिने परीक्षण अवधि भन्दा पहिले सदस्यता रद्द गर्नुभयो भने तपाइँ तपाइँको पैसा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ।
VyprVPN का प्रमुख सुविधाहरू:
सुरक्षाको लागि उन्नत टेक्नोलोजी
गतिशील सर्भर स्विच गर्दै
फायरफक्स, आईओएस, विन्डोज, ब्ल्याकबेरी, लिनक्स, र क्रोमबुक संग उपयुक्त
डिस्काउंटको साथ नेटफ्लिक्सको लागि VyprVPN खरीद गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् (छविको साथ हाम्रो लिंक यहाँ थप्नुहोस्)
तपाईंलाई नेटफ्लिक्सको लागि किन उत्तम वीपीएन आवश्यक छ?
त्यहाँ बहु कारणहरू छन् किन VPN का साथ नेटफ्लिक्स हेर्ने तपाईंको विकल्प हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले, तपाईं भौगोलिक रूपमा प्रतिबन्धित सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुन्न, र तपाईंलाई प्रतिबन्धहरू पार गर्न VPN आवश्यक छ। साथै, नेटफ्लिक्स सजिलैसँग प्रोक्सीहरू डिकोड गर्न सक्दछ ताकि तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
यी उत्तम नेटफ्लिक्स VPNs प्रयोग गर्ने बारेमा राम्रो पक्ष भनेको यो किफायती छ, र तपाईंले तिनीहरूमा पैसा स्प्लर्ज गर्नुपर्दैन। म यस लेखमा सूचीबद्ध सबै VPN हरूको परीक्षण गर्दछु, र ती मध्ये धेरैजसो नेटफ्लिक्स हेर्नको लागि विशेष रूपमा अनुकूलित छन्।
१ क्यू के नेटफ्लिक्सले यी वीपीएनहरू रोक्न सक्छ?
बर्ष:त्यहाँ प्रयोग गर्नको लागि धेरै आईपी ठेगानाहरू छन्, त्यसैले नेटफ्लिक्स आईपीमा ब्लक भयो भने पनि, तपाईं सामग्री पहुँच गर्न अन्य विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। संक्षिप्तमा, तपाईं कुनै पनि बाधा बिना भौगोलिक रूपमा प्रतिबन्धित सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ नेटफ्लिक्सले विशेष VPN का सबै आईपी ठेगानाहरूलाई रोक्न सक्दैन।
२Q कसरी बेलायत श्रोताको लागि उपलब्ध सामग्री हेर्नुहोस्?
बर्ष:तपाईं VPN प्रयोग गरेर युके सर्भरहरूमा जडान गर्न सक्नुहुनेछ, र यस तरीकाले तपाईं युके दर्शकहरूको लागि मात्र उपलब्ध सामग्री पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यो धेरै सरल छ, र तपाइँ VPN प्रयोग गरेर विशेष देश चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
3Q। सदस्यता रद्द कसरी गर्ने?
बर्ष:तपाईको खातामा लगईन गरेर सदस्यता रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। VPN पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी अवधि को समयावधि समाप्त हुनु अघि सदस्यता रद्द गर्न निश्चित गर्नुहोस् पैसा फिर्ता प्राप्त गर्नका लागि।
यी VPNs प्रयोग गर्न सजिलो छ, र तपाईं समर्पित अनुप्रयोग स्टोरबाट मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, यी पीसीहरूमा राम्रोसँग काम गर्दछ त्यसैले तपाईं बहु उपकरणहरूमा नेटफ्लिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यस लेखमा उपलब्ध लिंकहरूको प्रयोग गरेर छुटको दाबी गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
हामीले आधिकारिक वेबसाइटमा लिंकहरू प्रयोग गर्‍यौं, त्यसैले तपाईं VPN को मूल वेबसाइटबाट सिधा सदस्यता खरीद गर्दै हुनुहुन्छ।
२०२० मा सर्वश्रेष्ठ VPN सेवाहरू
उत्तम नि: शुल्क गीत बनाउने सफ्टवेयर
चलचित्र हेर्नका लागि उत्तम ईरबड्स
के यो १२3movies हेर्न कानूनी हो?
तल नेटफ्लिक्स सर्भर हो
roblox निःशुल्क डाउनलोड वा साइन अप छैन
www youtube mp3 कन्भर्टर कॉम